Tsvaga yekudyira neYellow Mapeji | Absolut Kufamba
Iwo Mapeji eIyero anoenderera kuve chirevo chehurumende chekutsvaga kwekugamuchira vaeni uye nyanzvi dzerudzi rwupi zvarwo, kubva kuna vanachiremba vemazino kusvika kune vanogadzira mapombi, munzvimbo huru dzepeninsula. Uye ndezvekuti kudiwa kwekutsvaga nzvimbo yekudyira inokodzera chiitiko chega chega kunomanikidza iwe kuenda kuYellow Mapeji, nekuti inounganidza nzvimbo dzakanakisa dzekudyira muSpain uye inopa mukana wekubhuka kubva papuratifomu pachayo.
Zvichienderana nechiitiko ichi, unogona kunge uchitsvaga muresitorendi ine menyu ezuva nezuva kana kuisirwa ine tsamba yakavhurika, zvese zvinosiyana zvinoenderana nekambani uye nezuva revhiki. Heano mamwe matipi ekuti ungatsvage sei uye kuti ndeapi maresitorendi aunogadzirira pachiitiko chega chega.
1 Yeresitorendi yekuvhara bhizinesi masikati
2 Iresitorendi yekudya nemhuri kana shamwari
Yeresitorendi yekuvhara bhizinesi masikati
Mabiko emabhizinesi anogona kuve eakasiyana kwazvo maitiro, kubva pakuva nechikamu chezvekutengeserana mukati umo boka revanhu rinotsvaga kuvhara chibvumirano, kumusangano pakati pevamwe vanoshanda mukambani imwe chete. Chinangwa chemusangano uyu chinogara chiri chekugadzira kudekara uye kugadzikana mamiriro pakati pevanodya, kuitira kuti ruremekedzo rwunodiwa ruitwe kuti utaure zvakananga uye zvakajeka.
Mupfungwa iyi, kune nzira mbiri dzakasiyana dzekusvika pachirongwa. Kana iri musangano wekutengesa, zviri nani kuenda kuresitorendi tsamba yakavhurika uko mumwe munhu anopiwa mukana wekusarudza yake yega ndiro. Nenzira iyi, hauzonzwa uchimanikidzwa kuita nekukurumidza kuita sarudzo, chimwe chinhu chinoshanda kunhandare yebhizinesi kana ukapihwa rusununguko rwakafanana Kune rimwe divi, kana kuri kudya pakati peboka rebasa kana pakati pevamwe vatoshanda navo vakamboshanda pamwe chete, resitorendi ine menyu ezuva nezuva ndiyo sarudzo yakanaka. Nemenyu yakavhurika, mapato ese anogona kugutsikana nechero sarudzo dziripo, pamwe nekugadzirisa mutengo kune ese marudzi ehomwe.
In the Yellow Pages dhairekitori unogona kuwana maresitorendi emarudzi ese, zvese zvine menyu yezuva uye usina, pamwe nekugona bhuku resitorendi sesarudzo mukati meplatform. Iyo sisitimu pachayo inobatsira kusiyanisa pakati peaya masisitimu maanenge achifanira kuchengetedza nekuda kwesimba.
Iresitorendi yekudya nemhuri kana shamwari
Kana chiitiko chekudya kure nemusha chine kupemberera kwemhuri kana mumusangano pakati peshamwari, zvinokwanisika kuti musangano unoitika mukupera kwesvondo. Mune ino kesi, pane maresitorendi anoshandura menyu pane chiitiko cheChishanu, Mugovera nemazororo, pamwe nevamwe vangangodaro vasina mukana wemenu yezuva racho. Mune dhairekitori reMapeji eruzivo ruzivo urwu runoratidzika kunge rwunokwanisa kuona pakati pezvese zvingangoitika.
Chero zvazvingaitika, kana zvasvika pamhemberero yemhuri, chakanakira kuenda kuresitorendi yakanaka ine menyu, kwaunogona kupa sarudzo yekusarudza. Kunyangwe izvi zvakare zvinoenderana nenhamba yevanodya.
Chero zvingave zviripo, iyo kambani uye zuva raunofanirwa kuenda kuresitorendi, muYellow Pages online dhairekitori zvinokwanisika kuwana resitorendi kugadzira marudzi ese ezvikafu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsvaga yekudyira neYellow Mapeji